Global Voices teny Malagasy » Miantso Anao Hamàrana Ny Fitsaratsaram-poana Miendrika Fanavahana Any Anaty Media ity Manampahaizana Santomeana ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jona 2014 16:08 GMT 1	 · Mpanoratra Rádio AfroLis Nandika (en) i Elisa Thiago, Erikah
Sokajy: Brezila, Paortiogaly, Sao Tome sy Principe, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Grada Kilomba  (sary nahazoana alalana ny fampiasana azy).
Nosoratan'i Carla Fernandes, mpanao gazety, mpitarika ny Afrolis Radio (“Ny traikefa Lisbon natao araka ny fomba Afrikana “) ity lahatsoratra ity, .
Matetika isika, eo amin'ny fiainana andavanandro, no iharan'ny karazana fitsaratsaram-poana isan-karazany, indraindray tsy tonga saina ny amin'izany akory. Nitombo tao anaty fahazarana mijery vehivavy ho toy ny “fitaovana ara-nofo”, ny olona mainty ho “mpamono olona” ary ny mpifindra monina, ho “raharaha manahirana.”
Mino i Grada Kilomba , izay manam-pahaizana manokana amin'ny fandalinana momba ny fanavakavahana sy ny zavatra taorian'ny fanjanahana, avy ao amin'ny Oniversiten'i Humboldt, ao Berlin, Alemaina, fa mitàna toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny fitsaratsaram-poana raiki-tampisaka ao an-tsaina ny media, nefa amin'ny lafiny iray, tsy misy adihevitra misokatra momba ny fanavakavahana any amin'ny haino aman-jery.
Araka io mpikaroka avy ao São Tomé sy Príncipe io, tsy mitsahatra mampiseho ” sary sy dokam-barotra ahitana olona mainty hoditra eo amin'ny toeran'ny tsy misy mpiahy, miankin-doha lava, mpamono olona, ary olona hafahafa” ny seraseran'ireo fampitam-baovao mnahazatra. Nilaza izao ihany koa i Grada Kilomba:
Ny tena marina, isan'andro, ampianarina isika hoe iza ny olona fotsy, ary aiza ny toeran'ny olona fotsy hoditra eo amin'io fiarahamonina io. Ary iza ny mainty hoditra sy ny toeran'io mpiray firenena io ao anatin'ity fiarahamonina ity.
Natao tao anaty lahatsary tafatafa  teo amin'i Chris Mckee sy i Tychicus Vasquez avy ao amin'ny Ragcha Media , izany fanambaràna izany, momba ny fomba hiadiana amin'ny fanavakavahana ao Eorôpa.
Fanehoana any anaty media sy tsy fananana ny maha izy azy intsony
Nanamafy i Grada Kilomba fa matetika nampiasa ireo hevitra raiki-tampisaka momba ny firazanana sy foko ny tsenan'ny mpanjifa sy ny orinasan'ny sarimihetsika mba ho entina hampitàna hafatra izay mankamin'ny tombontsoan'ny mpamokatra azy ihany, tsy miraharaha firy akory ny fomba entiny anehoana ireo vitsy an'isa amin'ny ankapobeny.
Raha ny Eorôpeana izao no resahana, izay vitsy an'isa any ny olona mainty hoditra, “mampikorontan-tsaina be ireo olona mainty izany, noho izy ireo tsy maintsy mampitaha foana ny tenany amin'ireo maherifo fotsy hoditra, ary manary ny maha mainty azy, noho izy ireny entina milaza olon-doza sy mpamono olona.” Manamafy ny manam-pahaizana, mandalina manokana ny momba ny fihavian'ny olona” fa efa nomanina mialoha ny tsy fahatsiarovan-tena miaraka mitranga eo amin'ny olona mainty, mba ho tonga eo amin'ny toetra tsy fananana ny maha izy azy intsony.
Ireo hevitra raiki-tampisaka mampiseho fiaviana anaty dokambarotra
Ohatra maro amin'ny hevitra raiki-tampisaka mahatohina no hita maneran-tany, eo amin'ny sehatry ny dokambarotra. Ao Brezila, tamin'ny faran'ny taona 2013, nitory ny orinasa Brasil Kirin (Schincariol taloha) ny Minisitry ny Fitsaràna, noho ny dokambarotra nampiasain'io orinasa io ho an'ilay labiera antsoina hoe Devassa Negra [Mainty misetrasetra ara-nofo, amin'ny fiteny Portigey], izay nampiseho sarina vehivavy mainty miaraka amin'ny soratra hoe :” Amin'ny alalan'ny vatana no ahalalàna ny tena vehivavy mainty. Feno tsara ny Devassa Negra. Endrika labiera mainty navela niotrika ela. Marihitra ary manana hanitra voanjava-maniry “malt” nendasina”
Dokambarotry ny labiera Devassa Negra.
Niseho tany amin'ny fiantombohan'ny taona 2010 ny fitarainana sy ny fanoherana avy amin'ny mpanjifa, vantany vao navoaka ilay dokam-barotra. Sasantsasany amin'ireo fikambanana vehivavy mainty hoditra no nitory io dokambarotra io tao anatin'ny gazety Breziliana, nitaraina fa nanamafy ny fomba fijery ny vehivavy mainty ho faran'izay fitaovana ara-nofo indrindra io dokambarotra io.
Ao Portiogaly, orinasa antsoina hoe Zon, manome tolotra momba ny fifandraisan-davitra sy ny serasera, nanomana fampielezan-kevitra natao teny ivelany izay nahitàna lehilahy iray manana endrika tandrefana, niteny hoe “aplovado” (apploved) raha toa ny tena izy ka hoe “aprovado” (approved) (niaiky) na koa hoe “o melhol pleço de semple” (the best plice ever) raha tokony hoe “o melhor preço de sempre” (the best price ever) (ny vidiny tsara hatrany). Nataon'ny olona toy ny niendrika fanavakavahana ilay fampielezan-kevitra nalefa tamin'ny taona 2013 satria nampisehoana mpandraharaha Japoney iray nisahana ny momba ny teknolojia, izay taitra tamin'ireo fandrosoana teknolojika, fa kosa, eo ankilany, sahirana mafy miteny portigey. Hita ho nanafintohina ireo mpikambana ao amin'ny kolontsaina Aziatika ilay dokambarotra.
Afaka miady amin'ny fanavakavahana ny haino aman-jery
Afaka mampahafantatra, mampianatra, manome hevitra sy mampifandray ny olona amin'ireo zava-misy tsy fantatry ny maro ny haino aman-jery. Izy ireo no fitaratry ny tany manodidina antsika, ary izy ireo no misary ny traikefa ananan'ny tsirairay na afaka hananany satria samy miaina amin'izany ny tsirairay. Misy hevitra fonosiny ireo hafatra alefan'ny haino aman-jery ireo, ary natao ho afaka voavahan'ireo olona maro an'isa izany mba ho azon'izy ireo ny tiany ho lazaina. Ny fampiasana ireo hevitra raiki-tampisaka hanehoana hevitra no fomba iray tena mety, entina hamonosam-baovao. Atao izay hampitovitovy ny dikany sy ny doko mba ho afaka fantarina ary ho toy ny zavatra mahazatra izy ireo. Na dia izany aza, fanatsorana fotsiny ny tena zavatra misy ireo hevitra raiki-tampisaka ireo, ary mety ho lasa sakaiza ratsin'ireo hevi-disoara-piaviana, araka ny anehoan'ireo ohatra maro voatanisa etsy ambony azy tsara izany. Nefa, na dia manampy manamafy ireo hevitra raiki-tampisaka momba ny fiaviana aza ny media, afaka ihany koa izy manampy amin'ny ady amin'ny fanavakavahana. Manohana hevitra i Grada Kilomba hoe ireo olona mainty hoditra ao Eorôpa, afaka manomboka “mandray fitenenana, mamerina manoratra ny boky, mamerina ny tantarantsika, maneho hevitra, mamokatra sarimihetska, sns.,” mba hanamboarana indray, sary tsara avy amin'ilay tena ihany, miaraka amin'ireo media izay anisan'ny nandà io sary io.
Nosoratan’ i Carla Fernandes, mpanao gazety, mpitarika ny Afrolis Radio (“Ny traikefa Lisbon natao araka ny fomba Afrikana “) ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/14/60381/
 Ny traikefa Lisbon natao araka ny fomba Afrikana: https://globalvoicesonline.org/2014/04/20/the-africanized-experience-of-lisbon/
 lahatsary tafatafa: https://www.youtube.com/watch?v=aj3esOI11Pg